Tapitra ve ny fanadio tanana? Ahoana no hahalalana raha azo antoka ny fampiasana azy - Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao | Desambra 2021
Orinasa, The Checkout Lalao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Vaovao, Wellness Mpanao Gazety Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Wellness Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fialam-Boly Fiaraha-Monina Fahasalamana
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao >> Tapitra ve ny fanadio tanana?
Na manahy momba ny hatsiaka ianao ary vanim-potoana gripa na ny valanaretina vao tsy ela akory izay aretina coronavirus 2019 (COVID-19) , angamba efa henonao fa ny fanasana tanana no fomba mahomby indrindra hiarovana amin'ny mikraoba. Raha tsy misy savony sy rano dia ny fanadiovana tanana no endrika fidiovana tsara indrindra manaraka izao mba hitandroana ny fianakaviananao ho salama sy ho salama. Fa io Purell taloha io ve izay mikodiadia ao ambanin'ilay fantsom-pandroana dia mbola mety ampy hanaovana fanadiovana? Sa tokony hifikitra amin'ny tavoahangy vaovao?
Ny valiny fohy dia: Eny, lany andro ny mpanadio tanana. Tokony hahita daty lany daty amin'ny marika ianao na voatanisa eo amin'ny faran'ny fitoeran-javatra. Amin'ny maha vokatra lozisialy antiseptika tsy azo hamarinina azy, ny mpanadio tanana dia voafehy ireo avy amin'ny U.S. Food and Drug Administration (FDA), ary takiana na manana daty fiaingana vita pirinty na manana talantalana mandritra ny telo taona. Midika izany raha ianao tsy afaka Mitadiava daty famaranana amin'ny tavoahanginao fanadiovana tanana, tokony hoheverinao fa ho tapitra ny telo taona aorian'ny nividiananao azy.
Inona no antony mahatonga ny famonoana mpanadin-tanana? Rehefa mandeha ny fotoana dia mihena ny alikaola amin'ny vokatra mpanadio tanana, mampihena ny tanjaka, hoy ny fanazavan'i Robert Williams, MD, dokotera momba ny fitsaboana ara-pianakaviana sy mpitsabo aretin-tsaina any Lakewood, Colorado, ary mpanolotsaina ho an'ny eMediHealth .
Heverina ho lany daty io rehefa mihena ambanin'ny 95% amin'ny ambaratonga voalaza azy ny habetsaky ny mpiasan'ny bakteria an'ny sanitizer, hoy ny Dr. Williams.
Ny mpanadio tanana matetika dia tafiditra ao anatin'ny sokajy roa: ny alikaola sy ny tsy alikaola. Ny FDA amin'izao fotoana izao dia mamela ny marketing ny alikaola etila (fahita mahazatra) sy ny alikaola isopropyl ho mpanadio mifototra amin'ny alikaola, ary ny benzalkonium klorida ho mpanadio tsy alikaola. Ireo saniteratera misy fatran'ny alikaola eo anelanelan'ny 60% sy 95% dia heverina ho mahomby indrindra. Fa izany alikaola rehetra izany dia afaka maina ny tananao amin'ny fampiasana miverimberina (noho izany aza adino ny hamandoana!). Ireo mpanadio tsy misy alikaola dia matetika misy benzalkonium klôroida ho mpiorina miasa ao aminy. Ireo karazana mpanadio tanana ireo dia miasa ary malefaka kokoa amin'ny hoditra matetika, saingy tsy heverina ho mandaitra toy ny mpanadio alikaola izy ireo.
Mbola mandeha ve ny sanitizer efa lany daty?
Ny mpanadio tanana, na dia tsy dia matanjaka intsony aza aorian'ny daty fahataperany, dia mbola hamono mikraoba ihany. Azo antoka tanteraka ny fampiasana azy na dia efa tapitra aza ny daty fa tsy hahomby amin'ny famongorana mikraoba toy ny andiany vaovao, hoy ny Dr. Williams.
Raha mampiasa ampy azy io ianao mba hikosehana ny tananao dia hampihena ny isan'ireo zavamiaina bitika ao aminy izany, hoy izy. Fa tsara kokoa hatrany ny manasa tanana amin'ny savony sy rano.
Rehefa vonona hanary ny tavoahangin-tsiranonao mpanadio tanana taloha na efa lany daty ianao hividianana iray vaovao, dia alao antoka fa manao an'izany soa aman-tsara ianao, hoy i Kristi C. Torres, Pharm.D., Mpikambana ao amin'ny Birao Fanadihadiana Ara-pitsaboana SingleCare avy any Austin, Texas.
Ny mpanadio tanana misy alikaola dia ranon-javatra mora mirehitra amin'ny hafanan'ny efitrano, hoy ny fanazavany. Raha manary any amin'ny toerana an-trano ianao dia araho ny politikan'ny faritra misy anao amin'ny fanariana ranon-javatra mora mirehitra.
Fanadio tanana vs. fanasana tanana
Amin'ny ady atao amin'ny aretina, ny fanasan-tanana dia tokony ho fiarovanao voalohany, hoy ny Dr. Williams. IRETO aretina mety ahitana bibikely vavony sy katsentsitra toa Clostridium difficile , cryptosporidium, ary norovirus. Zava-misy mahafinaritra: 15 Oktobra dia Andro manasa tanana manerantany !
Ny fanasana tanana amin'ny savony sy rano foana no vahaolana farany hampihenana ny habetsahan'ny mikrôby an-tanana, hoy izy. ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) nanaiky ary nanolotra fomba dimy hanasana fanasana tanana araka ny tokony ho izy:
Mampiasà rano mandeha madio (mety mafana na mangatsiaka) handena ny tananao alohan'ny savony.
Lather, ao anatin'izany ny ao ambadiky ny tananao, eo ambanin'ny hohonao ary eo anelanelan'ny rantsan-tànanao.
Mikosoka mandritra ny 20 segondra farafahakeliny, na ny mitovy amin'ny fihirana ny hira Fahafinaretana indroa.
Sasao ny tananao.
Atsofohy amin'ny lamba famaohana madio ny tananao na avelao ho maina izy ireo.
Raha tsy afaka manasa tanana ianao dia amin'izay dia lasa antiseptika mpisolo toerana sarobidy ny mpanadio tanana. Misafidiana mpanadio mifototra amin'ny alikaola, ary iray izay misy atiny alikaola 60% farafaharatsiny (azonao atao ny manamarina izany amin'ny marika). Raha ambanin'ny 60% ny fifantohana , mety tsy hamono karazan-mikraoba maro izy io na mety hampihena ny fitomboan'ny mikraoba fa tsy hanafoana azy ireo. Toy ny fanasana tanana ihany, misy fomba mety hampiasana ny fanadiovana tanana, hoy ny CDC:
Kitiho na apetaho amin'ny felatanana iray ny vola natolotra anao.
Afangaroy ny tananao, sarony ny faritra rehetra (aza hadino ny lamosina!) Mandra-pahamaina ny gel. Haharitra 20 segondra izany.
Raha manana loto na maloto hita ny tananao na nifandray tamina akora simika manimba (ohatra ny famonoana bibikely, ohatra) dia tadiavinao ny manadio azy ireo amin'ny savony sy rano. .
Aza adino, ny manasa tanana no tsara indrindra foana, fa manana ny toerany ny mpanadio tanana.
Ny mpanadio tanana dia tsy azo antoka hiarovana anao tanteraka amin'ny fiparitahan'ny aretina rehetra - tsy manafoana ny karazan-mikraoba rehetra izy ireo fa mandaitra amin'ny fampihenana maromaro amin'izy ireo, hoy ny Dr. Williams. Noho izany, tsara foana ny mitazona ny tananao ho madio, manasa azy amin'ny savony sy ny rano, ary mitazona ny tavoahangin-dranon-dranomaso miambina mba hampihenana ny habetsaky ny mikraoba mifanena aminao amin'ny alàlan'ny zavatra manohina.
Halaviro ny fanadio tanana alikaola vita amin'ny alikaola
Tamin'ny volana Jona 2020, namoaka fampitandremana ho an'ny mpanjifa ny FDA momba ny mety ho fandotoana ny methanol. Ny methanol, na alikaola vita amin'ny hazo, dia zavatra mety misy poizina rehefa difotra amin'ny alàlan'ny hoditra na voatelina ary mety hanohintohina ny ainy rehefa voatelina, hoy ny fanazavana. Ny olana eo an-tanana dia ny vokatra fanadiovan-tànana marobe izay nantsoina hoe misy éthanol, na toaka etil, fa mizaha toetra tsara amin'ny fahalotoan'ny methanol.
Ny methanol dia singa tsy azo ekena ho an'ny mpanadio tanana, ary ny FDA dia manohy manadihady ny raharaha. Ny marika toa an'i Eskbiochem, 4E Global's Blumen, Real Clean, ary maro hafa dia nanana vokatra nampahatsiahivina. Raha hijery ny lisitr'ireo mpanadio tanana tadidy farany, tsidiho ny tranokalan'ny FDA raha mila vaovao farany.
Ny fihanaky be loatra amin'ny akora dia mety hiteraka fisaleboleboana, fandoavana, aretin'andoha, fahitana manjavozavo, fahajambana maharitra, fanintona, koma, fahasimban'ny rafi-pitatitra, na fahafatesana. Raha mieritreritra ianao fa voan'ny methanol amin'ny alàlan'ny fanadio tanana, dia tokony hikaroka fitsaboana haingana ianao noho ny fanapoizinana. Ny helpline fanaraha-mason'ny poizina dia azo tratra amin'ny 1-800-222-1222 na -tserasera .
Concerta vs. Adderall: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Tahaka ny ahoana ny fitaizan-janaka amin'ny vanin-taolana idiopathic (JIA)
ohatrinona ny vidin'ny boribory ivf iray
ratsy ve ny plan b ho anao
ny fomba hanaitra ny tsinainao aorian'ny fandidiana
ohatrinona ny vaksinin'ny gripa any walgreens
inona ny haavon'ny kôlinina ara-dalàna?
ny tsara indrindra mihoatra ny fanafody kohaka
fomba voajanahary hanasitranana haingana ny aretina masirasira